အမြန်လမ်း အသုံးပြုတဲ့ ယာဉ်မောင်းများ ယာဉ်ပိုင်များ အဖြစ်မနေသိထားရန်....
အမြန်လမ်းမကြီး တစ်လျှောက် ယာဉ်အန္တရာယ်၊လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေဖို့အတွက် ယနေ့ ၁.၈.၂၀၁၇ မှစတင်ကာ ၈လပိုင်း တစ်လပညာပေးကာလသတ်မှတ်ပြီး ကီလိုမီတာ ၆၀/၉၀ ထက်ပိုမမောင်းရစတစ်ကာလေးတွေကို ယာဉ်မောင်းရှေ့တည့်တည့်မှန်မှာ ဖြူး အမြန်လမ်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက တိုးဂိတ်မှာ
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက် ယာဉ်အန္တရာယ်၊လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် မောင်းနှင်ရမည့်အမြန်နှုန်းကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမြန်လမ်းမကြီးများ ဥပဒေနှင့်အညီ အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Telematic စနစ်တတ်ဆင်ထားသော ခရီးသည်တင် #Express
ယာဉ်များနှင့် မတတ်ဆင်ရသေးသော ခရီးသည်တင် Express ယာဉ်ကြီးများသည် တစ်နာရီလျှင် (#၉၀_ကီလိုမီတာ) ထက်ပိုမမောင်းရ။
၂။အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခွင့်ပြုထားသော ကုနိတင်ယာဉ် ဝန်ပေါ့(ပစ်ကပ်၊Single Cab၊လိုက်ထရပ်၊တင်ဆောင်နိုင်သော (၃)တန်နှင့်(၃)တန်အောက် ဗင်န်နှင့်ထရပ်)မော်တော်ယာဉ်များသည် တစ်နာရီလျှင် (၆၀)ကီလိုမီတာထက် ပိုမမောင်းရ။
၃။အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခွင့်ပြုထားသောကုန်တင်ယာဉ် ဝန်လေး(တင်အား(၃)တန်နှင့်အထက် ဗင်န်နှင့်ထရပ်)မော်တော်ယာဉ်များသည် တစ်နာရီလျှင် (၆၀)ကီလိမီတာထက်ပိုမမောင်းရ။
၄။လူစီးယာဉ်(ဆလွန်း၊စတေရှင်ဝက်ဂွန်၊Double Cab)များသည် တစ်နာရီလျှင် (၁၀၀)ကီလိုမီတာထက်ပိုမမောင်းရ။
ပညာပေးကာလ တစ်လပြီးလို့ သတ်မှတ်ကီလိုထက်ပိုမောင်းရင်တော့ ဒဏ်ငွေ၅၀၀၀၀ ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီနေ့ကျွန်တော်သိရှိခဲ့တဲ့သတင်းလေးကို မိတ်ဆွေများအတွက်ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း….
ကျွန်တော် ဇော်မိုး ပိုင်အိုးနီးယား ၁၁၅
Credit : Zaw Hla Myint ( Pioneer 115)
အမွနျလမျးမကွီး တဈလြှောကျ ယာဉျအန်တရာယျ၊လမျးအန်တရာယျ ကငျးရှငျးစဖေို့အတှကျ ယနေ့ ၁.၈.၂၀၁၇ မှစတငျကာ ၈လပိုငျး တဈလပညာပေးကာလသတျမှတျပွီး ကီလိုမီတာ ၆၀/၉၀ ထကျပိုမမောငျးရစတဈကာလေးတှကေို ယာဉျမောငျးရှတေ့ညျ့တညျ့မှနျမှာ ဖွူး အမွနျလမျး ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားက တိုးဂိတျမှာ
ရနျကုနျ-မန်တလေး အမွနျလမျးမကွီးတဈလြှောကျ ယာဉျအန်တရာယျ၊လမျးအန်တရာယျ ကငျးရှငျးစရေေးအတှကျ မောငျးနှငျရမညျ့အမွနျနှုနျးကို ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာနမှ အမွနျလမျးမကွီးမြား ဥပဒနှေငျ့အညီ အောကျပါအတိုငျးသတျမှတျပေးထားပွီးဖွဈပါတယျ။
၁။ Telematic စနဈတတျဆငျထားသော ခရီးသညျတငျ #Express
ယာဉျမြားနှငျ့ မတတျဆငျရသေးသော ခရီးသညျတငျ Express ယာဉျကွီးမြားသညျ တဈနာရီလြှငျ (#၉၀_ကီလိုမီတာ) ထကျပိုမမောငျးရ။
၂။အမွနျလမျးမကွီးပျေါတှငျ ဖွတျသနျးမောငျးနှငျခှငျ့ပွုထားသော ကုနိတငျယာဉျ ဝနျပေါ့(ပဈကပျ၊Single Cab၊လိုကျထရပျ၊တငျဆောငျနိုငျသော (၃)တနျနှငျ့(၃)တနျအောကျ ဗငျနျနှငျ့ထရပျ)မျောတျောယာဉျမြားသညျ တဈနာရီလြှငျ (၆၀)ကီလိုမီတာထကျ ပိုမမောငျးရ။
၃။အမွနျလမျးမကွီးပျေါတှငျ ဖွတျသနျးမောငျးနှငျခှငျ့ပွုထားသောကုနျတငျယာဉျ ဝနျလေး(တငျအား(၃)တနျနှငျ့အထကျ ဗငျနျနှငျ့ထရပျ)မျောတျောယာဉျမြားသညျ တဈနာရီလြှငျ (၆၀)ကီလိမီတာထကျပိုမမောငျးရ။
၄။လူစီးယာဉျ(ဆလှနျး၊စတရှေငျဝကျဂှနျ၊Double Cab)မြားသညျ တဈနာရီလြှငျ (၁၀၀)ကီလိုမီတာထကျပိုမမောငျးရ။
ပညာပေးကာလ တဈလပွီးလို့ သတျမှတျကီလိုထကျပိုမောငျးရငျတော့ ဒဏျငှေ၅၀၀၀၀ ပါတယျခငျဗြ။ဒီနကြေှ့နျတျောသိရှိခဲ့တဲ့သတငျးလေးကို မိတျဆှမြေားအတှကျပွနျလညျမြှဝခွေငျးဖွဈပါကွောငျး….
ကြှနျတျော ဇျောမိုး ပိုငျအိုးနီးယား ၁၁၅